sei kusarudza bvunzo ipi kuti iite?
Kuru Kushandisa Michina Nzira Yokusarudza Ipi Bvunzo Yekushandisa?
Nzira Yokusarudza Ipi Bvunzo Yekushandisa?
Unosarudza sei bvunzo dzekuti dziitise otomatiki uye ndedzipi bvunzo dzekusiira kuongororwa kwemanyorerwo?
Usati watanga kushandisa bvunzo, unofanirwa kuona kuti ndeapi mabhenefiti aunowana nekumisikidza iyo bvunzo mushure mekuti iwe uwane nguva, simba uye zviwanikwa zvakaiswa mu test automation.
Pazasi pane zvimwe zvinhu zvekutarisa kuti ubatsire kuziva kuti ndeapi mabvunzo echinyorwa anofanirwa kana asingafanire kuitwa otomatiki. Sezvo chirevo chekare chichienda, nekuda kwekuti iwe unogona kugadzirisa chimwe chinhu hazvireve kuti iwe unofanirwa.
Heano mamwe madhairekitori ekubatsira kuona vakanaka musarudzo yekuyedza otomatiki:
Miedzo inofanirwa kuve inoitwa otomatiki:
Bhizinesi nzira dzakakomba - maficha kana mushandisi inoyerera iyo kana ikakundikana, inokonzeresa kukuvadza kukuru kune bhizinesi.
Kuyedza kunoda kuitirwa kunopesana neese kuvaka / kusunungurwa kwechishandiso, senge utsi bvunzo, sanity bvunzo uye regression bvunzo.
Miedzo inoda kumhanyisa kupesana nekugadziriswa kwakawanda - dzakasiyana OS & Bhurawuza musanganiswa.
Miedzo iyo inoita kufambidzana kumwechete kwebasa asi inoshandisa rakasiyana data rezvinowanikwa mune yega bvunzo kumhanya i.e. data-inotyairwa.
Kuyedza uko kunosanganisira kuisa mavhoriyamu makuru e data, sekuzadza mafomu akareba kwazvo.
Miedzo inogona kushandiswa pakuyedza kuita, senge kushushikana uye kuyedza bvunzo.
Miedzo inotora nguva yakareba kuti iitwe uye inogona kuda kuitiswa panguva yekuzorora kana husiku hwese.
Kuyedzwa panguva iyo mifananidzo inofanirwa kutorwa kuratidza kuti iko kunyorera kwakazvibata sezvaitarisirwa, kana kutarisa kuti kuwanda kwemapeji ewebhu anotaridzika zvakafanana pane akawanda mabhurawuza.
Kazhinji kutaura, iyo yekudzokorora bvunzo inomhanya, zvirinani zviri kune otomatiki.
Zvakare rangarira kuti bvunzo handidzo chete dzinokwikwidza otomatiki. Mabasa sekumisikidza kana kugadzira data rekuyedza rekuyedza bvunzo kuongorora zvakare vakwikwidzi vakakura veotomation.
Miedzo iyo isingafanire kuve inoitwa otomatiki:
Miedzo yaunongo mhanya kamwe chete. Icho chete chinosiiwa kumutemo uyu ndechekuti kana iwe uchida kuita bvunzo ine hombe kwazvo seti yedata, kunyangwe kana iri kamwe chete, saka zvine musoro kuzviita zvemuchina.
Yevashandisi ruzivo rwekuedzwa kwekushandisa (bvunzo dzinoda kuti mushandisi apindure nezvekuti nyore sei iko kushandisa kuri kushandisa).
Miedzo inoda kuitiswa ASAP. Kazhinji, chinhu chitsva chakagadzirwa chinoda mhinduro nekukurumidza kuti uzviedze pamurume pakutanga
Kuyedza kunoda ad hoc / random kuyedza kunoenderana neruzivo ruzivo / hunyanzvi - Kuongorora kwekuongorora.
Kupindirana bvunzo. Miedzo isina mhedzisiro inokonzeresa inowedzera ruzha rwakakosha. Kuti uwane kukosha kwakanyanya kubva mukushandisa otomatiki bvunzo dzinofanirwa kuburitsa mhedzisiro uye inovimbika mhedzisiro kuitira kuti ibudise uye ikundikane mamiriro.
Kuyedza kunoda kusimbiswa kunoonekwa, zvisinei, isu tinokwanisa kutora mifananidzo yemapeji panguva yekuyedza otomatiki uye tobva taita cheki chemanyorerwo emifananidzo.
Bvunzo isingakwanise kuve 100% otomatiki haifanire kunge yangoitwa otomatiki, kunze kwekunge kuita kudaro kuchichengetedza yakawandisa nguva.
samsung giya s2 yakasarudzika bhendi saizi
verizon wireless nhema chishanu 2017
Tora yemahara Samsung Galaxy S21 5G kubva kuT-Mobile usina kuwedzera tambo kana kutumira pamusoro penhamba
Zvekuita kana foni yako yanyorova
Samsung Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Cherechedzo 10+ (5G)
Samsung Galaxy Cherechedzo 5 uye S6 kumucheto + paAT&T pakupedzisira tora Android 6.0 Marshmallow
Yepamutemo Android Pie yeCherechedzo 9 kubuda mune dzimwe nzvimbo, Imwe UI mukutakura